ဆွီဒင်ရဲ့မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းမှု - | Apg29
ရောမအင်ပါယာတက်နှင့်အကျယ့်အကျွမ်းတဝင်အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီလောကအင်ပါယာဒါကြီးမားတဲ့နှင့်ကြီးစိုးပေမယ့်လည်းသူကပြီးတော့ပြိုကျဘယ်လိုဖြစ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ဘယ်လိုအကြောင်းပါပဲ။
လူများတို့သည် 1900 ကာလအတွင်းနေသူများကဖန်တီးသော 1800 နှင့်သက်သာချောင်ချိရေးပြည်နယ်အတွက်အရက်၏အရှက်ထဲကထနေတဲ့တိုင်းပြည်ဖွစျနိုငျသောအရာကိုတစ်ဦးသက်သေခံချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များတွင်ကံမကောင်းဖြိုဖျက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုအားသက်သေဖြစ်မည်။ တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကျောက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကလေးများအမျိုးမျိုးသောနေအိမ်များအကြားနေရာထိုင်ခင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြောင်းရွှေ့ရသည်ဘယ်မှာချောင်ဆက်သွယ်မှု, ကျိုးပဲ့မိသားစုများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
အဆိုပါလုံခြုံကလေးတစ်ဦးရဲ့အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တုန်လှုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကအစောပိုင်းနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခြေခံဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ ဆုံးရှုံးကလေးများအန္တရာယ်ကင်းမြေပြင်, ထိုသူတို့အနာဂတ်အတွက်မလုံခြုံခြင်းနှင့်မလုံခြုံသောလူဖြစ်လာမယ့်ကြီးမြတ်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
မိဘများ၏ကွာရှင်း၏နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50000 ကလေးများ။ ဒါဟာတစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်နှစ်ဖြစ်ပျက်နှင့်ကမ္ဘာမစည်းစိမ်ကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အနာထဖြတ်။ အဆိုပါကလေးများအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်ခက်ခဲသည်နှင့်ကလေးများအများကြီးကသူတို့ပြုသကဲ့သို့အမှုအရာမှထွက်လှည့်သောထိုသူတို့၏အမှားဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိမေးခွန်းနှင့်အတူအသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းအတွင်းနာကျင်မှုဖန်တီးခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်သောတဦးတည်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အခြေခံသင်သည်အဘယ်အရာကိုမှန်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကမှားသင်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါဟာ function ကိုတစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လုံးဝမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကျနော်တို့ဥပဒေများကိုသာမဟုတ်ဘဲရည်ညွှန်းပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းသံလိုက်အိမ်မြှောင် - on တစ်ဦးချင်းစီအဘို့နှင့်လှည့်ပတ်လူတို့အဘို့နှစ်ခုလုံးကိုအကောင်းဖြစ်ကြောင်းတန်ဖိုးများ။
ဘုရားသခငျသညျလူသားတို့အားအချို့ရိုးရှင်းတဲ့အခြေခံစကားများပေးတော်မူပြီ, သူတို့ကသူတို့အရေအတွက်သာတဆယ်ရှိပါသည်, များစွာသောမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ၏လူများတို့သည်ကမ္ဘာကသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဆိုပါကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောခဲ့တာ!
သငျသညျမသတ်ရကြမည် - အဲဒါကိုသူ့ကိုမှရှင်းလင်းစေရန်ကောင်းသောဖြစ်သည်မဟုတ်လော
သငျသညျကိုခိုးယူရမည်မဟုတ် - idyllic ရှိရာအဘယ်သူမျှမခိုးယူနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်လို?
မုသာစကားနှင့်အစွပ်စွဲချက် - - မည်မျှကြောင့်ပျက်စီးရကြပြီမဟုတ်သငျသညျကိုယျတျော၏အိမ်နီးချင်းတဘက်၌မမှန်သောသက်သေကိုမခံရကြမည်လော
သငျသညျအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကျူးလွန်နေရမည်မဟုတ် - ဆိုင်အတွက်ကောင်းသောအရာမဒါရှိပါ!
ဒါဟာသူတို့ပဲဘုရားသခင်တဆူတည်းအတွက်ယုံကြည်ချက်အဘို့မိမိတို့အဘို့အသက်ချမ်းသာရမဟုတျဘဲလိုအဓိကအားအကြောင်းကိုသူတို့ဘဝသို့ဘုရားသခငျသညျယူလိုသောမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အကြောင်းအတှေးအဖျက်ပယ်ကြကုန်အံ့ - - ဤမျှလောက်များစွာသောအတွေးနှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဒါဟာသူ့ကိုအပေါ်ရေတွက်ရန်ရှိသည်မှ embarrassing မည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်တည်ရှိကြောင်းစစ်အစိုးရကအများကြီးကျောင်းများတွင်ပရမ်းပတာအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ခက်နိုငျကငျြ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကျောင်းသားများ, အချို့ကိုမိမိအသက်ကိုယူသားသမီးသုံးယောက်တစ်ပါတ်ကြောင့်ရွေးကောက်တော်မူပြီတကား အခြားသူများကကျောင်းပြေးခြင်းမရှိဘဲကျောင်းမသွားချင်ကြဘူး။ ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းကရလဒ်တွေကိုခြိမ်းခြောက်ဆရာများသိသိသာသာလဲသေကြပြီ။
လူများတို့သည်ဆိုးရွားနေကြတယ်, စိတ်ရောဂါဆေးခန်းလိုအပ်ချက်ရှိလူများကကူညီရန်ကြိုးစားမှရှည်လျားသောစီတန်းဖြစ်ကြသည်။ 2015 ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့ကိုဖတျ:
"23 နှစ်များတွင်စိတ်မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းလူငယ်များအကြားသိသိသာသာတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဝေးနေဖြင့်အကြီးဆုံးတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်လူတို့တွင်မိန်းမတို့သည်အကြား 15-19 နှစ်နှင့် 70 ကြိမ် 140 ခြံတိုးမြှင့်ပေးသောစိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်၏။ "
ဤအဆိုးရွားကိန်းဂဏန်းများအတွက် 70 ကြိမ်နှင့် 140 ကြိမ်တိုးယူဖို့ကြိုးစားပါ!
ဆိုးယုတ်ရပ်ရွာထဲတွင်ကျော်တာဖြစ်ပါတယ်: အလမ်းများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှု, လူသတ်မှု, မုဒိမ်းမှု, မီးရှို့ကားများ။ လူငယ်တွေကပင်သူတို့ချောကျောင်းကိုမတိုင်မီရာဇဝတ်ကောင်ရှိပါတယ်, ကျနော်တို့လူသတ်မှုကလေးများကဆောင်ရွက်အကြောင်းကိုနားထောင်ကြလော့။ တချို့ရပ်ကွက်များတွင်လူနာတင်ကားများနှင့်မီးရဲတပ်ဖွဲ့အစောင့်အကြပ်မရှိဘဲရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူး။
ရလဒ်ယူကျုံးမရ - ဆွီဒင်ကွာဘုရားသခင်ထံမှလမ်းလျှောက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။